मत्ती २४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२४ येशू मन्दिरबाट निस्केर गइरहनुभएको बेला उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउन चेलाहरू उहाँको नजिक आए। २ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूले यी सब देखिरहेका छौ, होइन? म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यी सब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गासमेत नरहनेगरि ढल्नेछन्‌।” ३ उहाँ जैतुन डाँडामा बसिरहनुभएको बेला उहाँकहाँ सुटुक्क आएर चेलाहरूले सोधे: “हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्‌ अनि तपाईंको उपस्थिति* र यस युगको आखिरी समयको चिन्ह के हुनेछ?” ४ अनि येशूले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “होसियार बस, तिमीहरूलाई कसैले बहकाउन नपाओस्। ५ किनकि धेरै जना मेरो नाम लिएर ‘म नै ख्रीष्ट हुँ’ भन्दै आउनेछन्‌ र धेरैलाई बहकाउनेछन्‌। ६ तिमीहरूले युद्धको कोलाहल अनि युद्धको खबर सुन्नेछौ, तर तिमीहरू नआत्तिओ। किनकि यी सब हुनु आवश्यक छ, तर यत्तिकैमा यस युगको अन्त भइहाल्नेछैन। ७ “किनकि जातिको विरुद्धमा जाति अनि राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ-ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ। ८ तर यी सब त प्रसववेदनाको सुरुवात मात्र हुन्‌। ९ “तब मानिसहरूले तिमीहरूलाई सताउनेछन्‌ र मार्नेछन्‌ अनि मेरा चेला भएकाले तिमीहरू सबै जातिहरूमाझ घृणाको पात्र हुनेछौ। १० यसबाहेक, धेरै जनाले ठेस खानेछन्‌ र एकअर्कालाई धोका दिनुका साथै घृणा गर्नेछन्‌। ११ अनि धेरै झूटा भविष्यवक्ता देखा पर्नेछन्‌ र धेरैलाई बहकाउनेछन्‌। १२ अनि दुष्टता बढ्ने भएकोले धेरै जनाको प्रेम सेलाएर जानेछ। १३ तर जसले अन्तसम्म सहन्छ, त्यसले उद्धार पाउनेछ। १४ अनि सबै जातिलाई साक्षी दिनका लागि राज्यको यो सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि प्रचार गरिनेछ। त्यसपछि यस युगको अन्त हुनेछ। १५ “त्यसैले, तिमीहरूले जब उजाड पार्ने घृणित कुरा, जसबारे दानियल भविष्यवक्ताले भनेका थिए, पवित्र स्थानमा त्यो खडा भएको देखौला, (पढ्नेले समझ चलाओस्,) १६ तब यहूदियामा हुनेजति डाँडाहरूतिर भाग्न थालून्‌। १७ कौसीमा हुने मानिस आफ्नो मालसामान लिन ओर्लेर घरभित्र नपसोस्। १८ अनि खेतमा भएको मानिस आफ्नो लुगा लिन फर्केर घरतिर नजाओस्। १९ ती दिनमा गर्भवती र दूध खुवाउने स्त्रीहरूलाई हाय! २० तिमीहरू हिउँद वा विश्राम-दिनको बेला भाग्नु नपरोस् भनेर प्रार्थना गरिरहो। २१ किनकि त्यतिखेर यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ, जो संसारको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। २२ भनौं भने, ती दिन नघटाइने हो भने कोही मानिस बच्नेछैन। तर चुनिएकाहरूका लागि ती दिन घटाइनेछन्‌। २३ “तब यदि कसैले तिमीहरूलाई ‘हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ’ वा ‘त्यहाँ हुनुहुन्छ’ भन्छ भने नपत्याओ। २४ किनकि झूटा ख्रीष्ट अनि झूटा भविष्यवक्ताहरू देखा पर्नेछन्‌ र हुन सक्छ भने चुनिएका जनहरूलाई समेत बहकाउन ठूलठूला चमत्कार अनि अचम्मका कामहरू गर्नेछन्‌। २५ हेर, मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै चेतावनी दिएको छु। २६ त्यसकारण, यदि मानिसहरूले तिमीहरूलाई ‘हेर, उहाँ उजाडस्थानमा हुनुहुन्छ,’ भन्छन्‌ भने बाहिर नजाओ। ‘हेर, उहाँ भित्री कोठाहरूमा हुनुहुन्छ’ भन्छन्‌ भने नपत्याओ। २७ किनकि जसरी बिजुली पूर्वमा चम्कँदा पश्‍चिमसम्म देखिन्छ, त्यसरी नै मानिसको छोराको उपस्थिति पनि हुनेछ। २८ जहाँ सिनु हुन्छ, त्यहाँ चीलहरू भेला हुनेछन्‌। २९ “ती दिनका सङ्कष्टको तुरुन्तैपछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ, चन्द्रमाले आफ्नो उज्यालो दिनेछैन, ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन्‌ र आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्‌। ३० अनि मानिसको छोराको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सबै कुलले शोक गर्दै आफ्नो छाती पिट्नेछन्‌ अनि तिनीहरूले मानिसको छोरालाई शक्ति र ठूलो गौरवसहित आकाशका बादलहरूमा आउँदै गरेको देख्नेछन्‌। ३१ अनि उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई बिगुलको ठूलो आवाजसहित पठाउनेछ र परमेश्वरले चुन्नुभएका जनहरूलाई तिनीहरूले आकाशको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म चारै दिशाबाट* जम्मा गर्नेछन्‌। ३२ “अब अन्जीरको रूखलाई दृष्टान्तको रूपमा हेरेर यो कुरा सिक: हाँगाहरू पलाएर पालुवा लाग्नेबित्तिकै तिमीहरूले ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भनेर थाह पाउँछौ। ३३ त्यसैगरि जब तिमीहरू यी सबै कुरा देख्छौ तब ऊ* नजिकै, ढोकामै छ भनी जान। ३४ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यी सब कुरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै पनि हालतमा बितेर जानेछैन। ३५ आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछन्‌ तर मेरा वचनहरू कुनै पनि हालतमा बितेर जानेछैनन्‌। ३६ “त्यस दिन र समयको* विषयमा कसैले जान्दैन, न स्वर्गदूतहरूले न त छोराले तर बुबाले मात्र। ३७ नूहको दिन जस्तो थियो, मानिसको छोराको उपस्थिति पनि त्यस्तै हुनेछ। ३८ किनकि ती दिनहरूमा नूह जलप्रलयअघि जहाजभित्र नपसेको दिनसम्म तिनीहरू खाँदै अनि पिउँदै थिए, विवाह गर्दै अनि गराउँदै थिए। ३९ अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै नलगेसम्म तिनीहरूले यादै गरेनन्‌, मानिसको छोराको उपस्थिति पनि त्यस्तै हुनेछ। ४० त्यसबेला दुई जना पुरुष खेतमा हुनेछन्‌; एक जना लगिनेछ अनि अर्को छोडिनेछ। ४१ दुई जना स्त्री जाँतो घुमाइरहेका हुनेछन्‌; एक जना लगिनेछ अनि अर्को छोडिनेछ। ४२ त्यसकारण जागा रहो, किनकि तिमीहरूका प्रभु कुन दिन आउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई थाह छैन। ४३ “तर एउटा कुरा जानिराख, यदि घरमालिकलाई चोर कुन प्रहरमा आउँदैछ भनेर थाह भएको भए ऊ जागै बस्नेथियो र त्यसलाई आफ्नो घर फोरेर छिर्न दिने थिएन। ४४ यो कुरा विचार गर्दै तिमीहरूले पनि आफू तयार रहेको प्रमाण देओ, किनकि तिमीहरूले नचिताएको समयमा मानिसको छोरा आउँदैछ। ४५ “वास्तवमा विश्वासी र बुद्धिमान्‌ दास को हो, जसलाई उसको मालिकले आफ्नो घरका अरू दासहरूलाई ठीक समयमा भोजन देओस् भनेर नियुक्त गरेका हुन्छन्‌? ४६ आनन्दित हो त्यो दास, जसलाई उसको मालिकले फर्केर आउँदा त्यसै गरिरहेको भेट्टाउँछन्‌! ४७ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिनले उसलाई आफ्ना सबै सम्पत्तिहरूमाथि नियुक्त गर्नेछन्‌। ४८ “तर यदि त्यो दास दुष्ट भयो र उसले मनमनै ‘मेरो मालिक बियाँलो गर्दै हुनुहुन्छ’ भनी सोच्यो ४९ अनि आफ्ना सँगी दासहरूलाई पिट्न थाल्यो र पियक्कडहरूसित खानपिन गर्न लाग्यो भने ५० त्यो दासको मालिक उसले आशै नगरेको दिनमा र उसलाई थाहै नभएको समयमा आउनेछन्‌। ५१ अनि उसलाई असाध्यै कठोर दण्ड दिनेछन्‌ र कपटीहरू भएको ठाउँमा फ्याँकिदिनेछन्‌, जहाँ रोदन अनि वेदनाको चीत्कार हुनेछ।
^ मत्ती २४:३ * ग्रीकमा “पारुसिया।” अतिरिक्त लेख ५ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती २४:३१ * शाब्दिक, “चारै बतासबाट।”
^ मत्ती २४:३३ * अर्थात्‌, “मानिसको छोरा।”
^ मत्ती २४:३६ * शाब्दिक, “घण्टाको।”